MW CMC Oo Kahadlay Xaalada Deg-Dega ah Ee Wadanka - Cakaara News
MW CMC Oo Kahadlay Xaalada Deg-Dega ah Ee Wadanka
Addis ababa ( Cakaaranews ) Isniin, 10ka October 2016. Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa kahadlay xaalada deg deg ah (state emergency) ee uu raisal-wasaaraha dalka mudane Hailemariam Desalegn kusoo rogay wadanka isagoo sheegay inay sax tahay talaabada uu qaaday Raisal-wasaaruhu ee ay ansixiyeen golaha wasiiradu islamarkaana ay tahay wadada kali ah ee Cadawgeena isu soo gaashaan buuraystay inuu dumiyo mashruuca wayn ee Abay, dhacana hantida Shacabka iyo dhibaataynta bulshada dalka naf iyo maalba lagaga guulaysan karo.
Madaxwayne CMC ayaana intaa kudaray in xaalada deg-deg ah ee lasoo rogay ay daahday balse wali ay tahay xili ku haboon sababtoo ah hadii xili hore lasoo rogi lahaa dadka qaar ayaan kuqanceen oo waxay Galdaloolo unoqon lahayd cadawga. Hadase waa xili sax ku ah waayo shacabka ayay katimid oo yidhi Dawladu talaabo hakaqaado ururada nabad-diidka ah ee ONAG iyo Ginboot7. kuwaas oo burburiyay Hantidanadii naf iyo maalba, rabana inay wadanka dib ugu soo celiyaan nidaamyadii cabudhiska iyo Cadaadiska kudhisnaa ee Dhargiga. Sidaadarteed ayuuna madaxwaynuhu ku amaanay go'aanka Geesinimada leh ee uu qaatay raisal-wasaaruhu xiligii kuhaboonayd.
Dhanka kale, madaxwaynaha ayaa aad u amaanay wacdarihii banaan-baxyada ee dhamaan qaranjoogta Iyo qurbajoogta DDSI ee kukala nool dacalada dunida sida qurbajoogta waqooyiga America, belgiumka, wadamada scandanivianka, Germany, Carabaha, Africa iyo wixii lamid ah oo ay kumuujiyeen Itoobiyaanimadooda islamarkaana ay kaga soo hor-jeedeen ururada nabadiidka ah ee ONAG, Ginboot7, Ubbo, Al qushaash iyo wixii lahalmaala. Madaxwaynaha ayaana xusay in talaabada qurbajoogta deegaanku qaaday ay shacabwaynaha dalka dareensiisay wadaniyada iyo nabad jacaylka dadka soomaalida ah islamarkaana ay maanta kasheegan-yihiin guud ahaan dalka iyo dunidaba iyadoo xukuumada federalka ah ee dalku kufaanayso. Wuxuuna talaabadooda kutilmaamay mid geesinimada, deeqsinimada iyo indheer-garadnimada soomaalida itoobiya xaqiijisay.
Ugudanbayna, madaxwaynaha ayaa xaqiijiyay in awal hore la aaminsanaa in cadawga itoobiya uu dhinaca bari jiro balse maanta dadka bariga dagan ee soomaalida itoobiya uu yahay shacab kahortagaya wax alaale iyo wixii dhibaato ku ah shucuubaha iyo qoomiyadaha dalku kakooban yahay. Wuxuuna intaa kudaray in go'aanka dadka soomaalida ah iyo xukuumada DDSI xaqiiqnimadiisa uu yahay kan dhidibada u aasay oo cid kastoo shaki ku jiray ucadeeyay go'aanka uu raisal-wasaaraha dalku kudhawaaqay. Taasoo katurjumaysa xaalada uu wadanku kusugan yahay isagoo sheegay inay maanta cadaatay in qurbajoogta deegaanku badbaadisay nidaamka federalismka ah iyo dastuurka dalkaba ee itoobiyada cusub ee maanta.
Iskusoo wada duuboo, madaxwaynaha ayaa amaanay mas'uuliyiinta, gudiyada iyo xubnaha qurbajoogta ee kunool caalamka oo taariikhda baal dahab ah kagalay isagoo sheegay inay halkaa kukala baxeen cida sida dhabta ah u taageersan nidaamka federalismka ah iyo cida uusan kadhaadhacsanayn federalismku ee bilaa mab’da a ah. Wuxuuna si gooni ah u amaanay qurbajoogta DDSI ee Australia gaar ahaan gudiyadii qaban-qaabada oo uu kamid yahay mudane cabdiqani faarax yuusuf iyo dhamaanba cid alaale iyo cidii gacan kagaysatay islamarkaana kaqaybqaadatay banaan-baxyadaasi dal iyo dibadba.